Football Khabar » कोपा अमेरिका : उरुग्वे–इक्वेडर र कतार–पराग्वे भिड्दै !
कोपा अमेरिका : उरुग्वे–इक्वेडर र कतार–पराग्वे भिड्दै !
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटलमा ब्राजिलको स्थानीय समअनुसार आज राति दुई खेल हुँदैछन् । समूह चरणअन्तर्गत आज समूह ‘बी’को एक र समूह ‘सी’को एक गरी दुई खेल हुन लागेका हुन् ।
आज हुने पहिलो खेलमा पराग्वे र कतार खेल्नेछन् भने दोस्रो खेलमा उरुग्वे र इक्वेडर खेल्नेछन् । नेपाली समयअनुसार कतार र पराग्वेको पहिलो खेल भरे (सोमबार बिहान) राति १२ः४५ बजेबाट हुनेछ । दोस्रो खेल बिहान ३ः४५ बजेबाट उरुग्वे र इक्वेडरबीच हुनेछ ।
यी दुवै खेलमा भिड्न लागेका ४ वटै टिमको यो पहिलो खेल हो । आज यी दुई खेल सकिएपछि पहिलो चरणको एक खेलमा अर्को दिन जापान र चिली भिड्नेछन् ।
आज राति हुने एक खेलमा पाहुना टोली कतारले पराग्वेको सामना गर्नेछ । कतार एसिया कपको विजेता टिमको हैसियतमा पाहुना टोली बनेर यस प्रतियोगितामा खेलिरहेको छ ।
आज कतार र पराग्वेको खेलको नतिजाले सोही समूहको पराजित टिम अर्जेन्टिनालाई फरक पर्नेछ । किनभने, आज बिहान अर्जेन्टिना कोलम्बियासँग २–० ले हारेको छ । आजको खेलमा कुनै एक टिमले स्पष्ट जित निकाले अर्जेन्टिमाथि दबाब बढ्नेछ । तर, दुवै टिमले बराबरी खेल्दै १–१ अंक बाँडे त्यसको फाइदा अर्जेन्टिनालाई फाइदा पुग्नेछ ।
आज हुने उरुग्वे र इक्वेडरको खेल भने सबैभन्द्रा केन्द्रमा हुनेछ । किनभने, सर्वाधिक धेरै १५ पटक कोपा जितेको र यसपटक पनि उपाधि जित्ने दाउमा रहेको उरुग्वे आज आफ्ना स्टार खेलाडी लिएर इक्वेडरविरुद्ध उत्रिँदैछ ।
उरुग्वेको टोलीमा लुइस स्वारेज, इडिसन काभानी, म्याक्सी गोमेज, डिएगो गोडिनलगायत स्टार खेलाडीहरू हुनेछन् । यसपटक उरुग्वेलाई पनि प्रमुख उपाधि दाबेदारमध्यको एक टिम मानिएको छ ।
प्रकाशित मिति १ असार २०७६, आईतवार ०७:५९